Ny tanjona 24 tsara indrindra ho an'ny tetikasa Koi momba ny tetikasa ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
sonitattoo Aogositra 25, 2016
Rehefa te-hahazo tatoazy izay tsara tarehy sy kolontsaina ianao dia afaka mampiasa ny tato-koi trondro koi. Efa ela no nahafantarana ny trondro koi ny Amerikanina. Androany, mandalo ireo trondro ireo ny olona mandritra ny fetiben'ny jono manokana.
Ilay mpanakanto mitondra ny tattoo #koi #fish dia singa manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny karazana sary azonao. Maro ny mpanakanto maro an-tserasera ary ny tombon-tsoanao dia ny mifidy afa-tsy ny tsara indrindra sy azo vidiana araka ny teti-bola.
Ny habetsahan'ny koi #tattoo dia ny fiheverantsika alohan'ny hahazoana iray. Tsy vaovao akory fa ny lehibe kokoa io koi trondro koi io, ny lafo kokoa ho voampanga anao.
Ny antony dia noho ny tati-koi-trondro koi dia mety haka fotoana be sy faharetana nefa ny kely kokoa dia tsy lafo loatra. Ny habetsahan'ny koi trondro koi dia mety tsy mamaritra ny vidiny satria misy karazana trondro koi izay tena lafo vidy.
Full Tomboy Koi Arm
Tokony ho azonao fa ny fahasarotan'ny #design dia zavatra tokony hijerena anao. Maro ireo tranonkala ahafahanao mahazo ny tanjonao. Ny loko dia lafiny iray manan-danja amin'ny koi trondro koi izay tokony hijerena rehefa handeha hamolavola an'io loko io.
Tattoo mahatalanjona Koi
Ny safidin'ny mpanakanto matihanina dia avela ho anao ny mifidy. Tokony hampitaha ny vidiny ianao ary hijery mialoha ny hahazoana an'io tati koi trondro koi io.
Tsy tokony hampandefitra ny hatsarana amin'ny vidiny mora ianao. Ny olona dia mahita ny zavakanto eo amin'ny vatanao ary raha toa ka vita tsara, dia mety ho olana goavana ianao.
Hand koi trondro
Misy mpanakanto manolotra mpanjifa be dia be. Ireo fihenam-bidy ireo dia zavatra tokony hotsarainao.
Tui gui Koi trondro
Ny tahan'ny vidin'ny koi trondro toy izany dia mety maniry ny vidiny isan'ora. Ny tahan'ny ora dia mety ho asa an-tsokosinao ho anao izay antony mahatonga ireo olona marobe mivoatra izay tia ny koi trondro fanao dia mandoa saran-dalana.
Thui Koi trondro
Ity tati-trondro koi koi ity dia tokony hatao amin'ny seza iray. Ny habetsaky ny vola laninao handoavana dia zavatra tianao ho tianao rehefa mipetraka ianao.
Sweet Tattoo Fish
Ny vidiny dia mora kokoa raha oharina amin'ny fananana isan-karazany ho an'ny zavakanto.
Tui Super Fish
Samy manana ny fomba fijerintsika tsirairay avy isika rehefa mahita tattoos trondro koi. Misy olona tsy tena tian'izy ireo, ny sasany mety tsy mahatakatra akory hoe nahoana ny olona no manao izany raha misy olona tsy afaka miaina tsy misy. Ny vaovao tsara dia, na inona na inona ny fomba fijerinao ny endriky ny tati-koi trondro koi, dia lasa nijanona izy. loharanon-tsary
Cute Tattoo Fish
Ny tati-ko koi koi toy izany dia nofinidy mba hanomezana dikany, fa rehefa misy olona manamboatra loko sy loko tsy mety, ny olona dia mety hanenina noho ny antony nanosika azy tamin'ny voalohany. loharanon-tsary
Alohan'ny hieritreretanao fa manana tati-trondro koi, dia zava-dehibe ny miresaka momba ny endrika sy ny hevitr'ilay mpanakanto anao. Izany dia hanampy anao hahatakatra tanteraka ny zavatra ataonao. Raha misy fanovana, dia azonao atao izany alohan'ny hanaovana ny fangoronana ao amin'ny vatanao. loharanon-tsary
Tokony hotsaroanao fa manan-danja ny mpanakanto rehefa handeha ho any tati-koi trondro koi toy ity ianao. Nahita tanjona goavana koi ny tati-koi-tattoo izahay satria nandona ny asany ny mpanakanto iray tsy mpitsabo. loharanon-tsary
Ny tavy voankazo Koi
Miverina amin'ny tazo feno koi trondro
Misy fitaovana isan-karazany ampiasaina amin'ny famoronana. Ny zavatra tsara azonao atao ho anao rehefa te-hanana tati-koi trondro koi dia manao fikarohana kely. loharanon-tsary
Tattoo kôlitika kôlitika
Tato-kafe trondro Koi
Ny fikarohana dia izay hamonjy anao amin'ny fanenenana maro amin'ny ho avy rehefa mahazo ny tazo koi trondro eo amin'ny vatanao ianao. loharanon-tsary
Tati manokana momba ny trondro Koi
Nandrenesanay ireo olona izay miezaka ny manala ireo tattoos mahazaka koi satria tsy takatr'izy ireo ny zavatra nataon'izy ireo rehefa nosokafana izy ireo. Mba hisorohana ireo tantara an-tsehatra marobe aorian'ny taona maromaro momba ny tati-koi trondro koi, dia azonao antoka fa mahazo tattoos trondro koi ianao fa tsy hanenina amin'ny faran'ny andro. loharanon-tsary
Alohan'ny ahafahanao mieritreritra an'ity tati-trondro koi ity dia ataovy izay hahazoanao olona iray tena tsara amin'ny fanaovana sary. loharanon-tsary
Izany dia fomba iray ahafahanao ho mpirehareha amin'ny endrika tito-kisoa mahafatifaty koi izay hijoro ho anao amin'ny toerana rehetra izay hitan'ny olona anao. loharanon-tsary
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa ny tazo kisoa
tattoos mahafatifatylion tattoostattoo watercolortatoazy ho an'ny zazavavyeagle tattoostatoazy voninkazotatoazy fokocat tattoosrip tattooselefanta tatoazymoon tattoosloto voninkazomasoandro tatoazyfitiavana tatoazyhenna tattooTatoazy ara-jeometrikaAnkle Tattoostattoos ho an'ny lehilahyraozy tatoazynamana tattoos tsara indrindratattoos backtattoos foottattoo cherry blossomtattoo ideasmehndi designtattoos rahavavytattoo eyetattoo infinitytattoos mpivadytattoosmozika tatoazytratra tatoazytato ho an'ny vatofantsikatattoos sleevekoi fish tattootattoosNy zodiaka dia mampiseho tatoazytatoazy lolotattoos voronadiamondra tattooHeart Tattoosanjely tattoostanana tatoazyarrow tattoocompass tattootattoos crossTattoo Featherscorpion tattootattoo octopustattoos arm